Hamamoana tafahoatra, lozam-pifamoivoizana: dimy ireo maty ary 150 ny nentina teny amin’ny HJRA | NewsMada
Hamamoana tafahoatra, lozam-pifamoivoizana: dimy ireo maty ary 150 ny nentina teny amin’ny HJRA
Maromaro ny namoy ny ainy, ny niditra hopitaly nandritra ny fety. Na izany aza, voalaza fa nilamindamina ihany ny fiatrehan’ny hopitaly ny asany, toy izany koa ny fety teny amin’ny fiaraha-monina teny.
Nisy hatrany ny olona maty mandritra ny fety, ary fantatra fa tafakatra dimy izany hatramin’ny omaly hariva, raha 150 kosa ny marary nanao fizahana teny amin’ny HJRA. “Azo lazaina ho nilamina ny fetin’ny Krismasy tamin’ity taona ity”; raha ny nambaran’ny dokotera teo anivon’ny sampana vonjy taitra, etsy amin’ny hopitaly HJRA Ampefiloha. Hatramin’ny tontolo andron’ny 24 desambra, ka hatramin’ny omaly, nahatratra efatra ireo olona maty, ary 150 ireo tonga nizaha fahasalamana tao amin’ity hopitalim-panjakana ity.
Ny iray tamin’ireo olona nindaosin’ny fahafatesana no voalaza ho efa maty ka naterina teny amin’ny tranom-paty HJRA. Ny iray tamin’ireo, fantatra fa maty vokatry ny fahasemporana, raha maty vokatry ny aretina mikiky kosa ny iray. Nisy kosa ny olona matin’ny toaka tamin’izany ka nahatafakatra ny isa ho dimy.
Ny 32 tamin’ireo tonga teny amin’ny HJRA, voatery naiditra hopitaly, noho ny aretina nahazo sy ny loza tampoka tsy nampoizina. Miisa 39 ireo naratra vokatry ny ady, 27 ireo niharan’ny lozam-pifamoivoizana an-dalambe, ary miisa 19 ireo tratran’ny loza an-trano na « accident domestique ».
Fantatra fa nisy tamin’ireo narary hita teny an-toerana, no tratran’ny loza teo am-perinasa, loza ara-panatanjahantena, ary loza tany an-tsekoly. Nambaran’ny mpitsabo iray tao amin’ity sampana vonjy taitra ity, araka izany, fa nilamina tsy toy ny isan-taona ny tamin’ity, fa azo lazaina ho nilamina.
Raha ny tao amin’ny trano fameloman’aina, fantatra fa miisa telo, ireo torana, vokatry ny fisotroana toaka be loatra, tanatin’ny fetin’ny Krismasy io, ary voalaza fa nisy maty mihitsy. Ny roa tamin’ireo, ny andron’ny 24 desambra, raha omaly ny iray. Teo amin’ny fahatapahan’ny lalan-dra, nahatratra roa ireo niharan’izany. Raha ny resaka fanapoizinana ara-tsakafo indray, tsy nahitana tranga mikasika izany.
Tsy nanana olana ireo mpitsabo rehetra tao amin’ireo sampana mpandray marary miisa roa etsy amin’ny HJRA ireo, ary samy nandray an-tanana haingana ireo olona tonga nila izay fitsaboana izay avokoa. Ny amin’ny fetin’ny faran’ny taona indray, efa mivonona ny dokotera mpiandry raharaha rehetra amin’izany sy ny fandaminana.